Fifohazam-panahy lehibe voalohany - Wikipedia
Ireo mpifoha ara-panahy ireo dia nanovona, ho fanampin' ny foto-pampianarana laharam-pahamehan' ny prôtestantisma nohavaozina, ny fananterana mafy ny firotsahan' ny fitahiana avy amin' ny Fanahy Masina. Ny toriteny tora-po dia nahatonga ny mpihaino hahatsapa faharesen-dahatra lalina isam-batan' olona ny amin' ny filany ny famonjen' i Jesoa Kristy sy namporisika amin' ny fandinihan-tena sy ny firotsahana an-tsehatra ho ao amin' ny fenitra vaovao momba ny fitondran-tenan' ny tsirairay.
Ny teôlojian' ny fifohazam-panahy (fiekem-pahotana, fiovam-po, fionoana) dia manoritra mazava fa ny fiovam-pinoana dia tsy fanekana ara-tsaina ny fanitsiana ny foto-pampianarana kristiana, fa tokony ho "fahateraham-baovao" tsapa ao anaty. Nampianatra koa ireo mpifoha ara-panahy ireo fa ny fandraisana ny fahazoana antoka ny famonjena dia zavatra andrasana ara-dalàna eo amin' ny fiainana kristiana.
Nahatoga ny fampiraisana ny zavatra inoana eo amin' ny antokom-piangonana maro ny fifohazam-panahy ara-pilazantsara, nefa nitarika fizarazaràna koa teo amin' ireo fiangonana efa nisy, ka tao ireo nanohana izany fifohazam-panahy izany ary tao ireo tsy nanao izany. Ny mpanohitra dia niampanga ny fifohazam-panahy ho nanome vahana ny fikorontanana sy ny hafanam-po tafahoatra teo amin' ny fiangonana tamin' ny namelany ny mpitory teny mandehandeha tsy hahazo fiofanana sy namporisika ny hafanam-po ara-pivavahana.
Tao Angletera, ny Anglikana evanjelika dia tonga fari-piangonana iray lehibe eo anivon' ny Fiangonan' i Angletera, ary ny metôdisma dia nandroso nanomboka tamin' ny asa fanompoana nataon' i Whitefield sy Wesley. Tao amin' ny zanatany tany Amerika dia niteraka ny fiangonana kôngregasionalista sy ny fiangonana presbiteriana hisaraka ny fifohazam-panahy, nefa izany fifohazam-panahy izany ihany no nampatanjaka ny fiangonana metôdisma sy batisma. Tsy dia nisy fiantraikany mivantana tamin' ny ankamaroan' ny fiangonana loterana sy koakera (na Fiangonan' ny Sakaiza) ary ny fiangonana tsy prôtestanta izany, nefa taty aoriana dia niteraka fivakisana teo amin' ireo Koakera izay mbola maharitra mandraka ankehitriny.
Ny mpitory teny ara-pilazantsara dia nikatsaka ny hampiditra ny olona tsirairay ao amin' ny fiovam-po, tsy anavahana lahy na vavy, na volon-koditra, na sata. Tao amin' ireo zanatany tany Amerika Avaratra, indrindra tao amin' ny faritra atsimo, ny fifohazam-panahy dia nampitombo isa ny andevo afrikana sy ireo olona afaka mainty hoditra izay niaina manoloana ny kristianisma sy niova finoana ho amin' izany. Naka hevitra tamin' izany koa ny fananganana ireo fikambanana misiônera vaovao toy ny Baptist Missionary Society tamin' ny taona 1792.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifohazam-panahy_lehibe_voalohany&oldid=1039812"
Voaova farany tamin'ny 9 Novambra 2021 amin'ny 15:03 ity pejy ity.